HomeWararka Somaliyais rasaaseyn ka dhacday Magaalada Garoowe oo Khasaaro Ka dhalatay
November 7, 2021 Wararka Somaliya, Puntland, Wararka Maanta 0
Inta la xaqiijiyay hal askari ayaa geeriyooday laba kalena waa ay dhaawacmeen kadib is rasaaseyn Magaalada Garoowe ku dhexmartay ilaalada madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash iyo Ciidamada Taraafikada.
Is rasaaseynta ayaa la sheegey in ka dhalatay baabuur ay Ciidamada taraafikada ka xareeyeen Ciidanka madaxweyne ku-xigeenka, iyada oo labada Ciidan ay degan yihiin Goobo isku dhow.
Ciidamo kale oo ka tirsan kuwa Maamulka Puntland ayaa kala dhexgalay Ciidamada dagaalamay, iyada oo dadka magaalada Garoowe uu saameeyay dagaalka dhexmaray labada Ciidan.
Wararka warbaahinta ay heleyso ayaa waxaa ay sheegayaan in Afar askari loo xiray dagaalka dhexmaray Ciidamada Taraafikada iyo kuwa ilaalada Madaxweyne kuxigeenka Puntland si baaritaan loogu sameeyo.
Magaalada Garoowe ee Gobolka Nugaal oo kamid ah meelaha ugu amniga wanaagsan degaannada Puntland ayaa bilihii la soo dhaafay ka dhacay dhacdooyin ay kamid ahaayeen dilal ay askarta u geysteen dad Shacab ah iyo dhac dhalinyaro Burcad ah u geeysanayeen xilliyada habeenkii dadka Shacabka.
Gudoomiyaha Dhuusamareeb oo Xoolaha Nool iyo raashin ku Wareejiyay Ciidamada Galmudug (Sawiro)